China isikhonkwane sentambo yenylon eyenzelwe iitoni ezili-10 zomzi mveliso kunye nabathengisi | IH & F. nylon
Isikhokelo se-nylon sisetyenziswa kumthi waseYurophu, oyinxalenye ye-crane, kwaye isikhombisi seNylon sifakwe kwi-reel ukuze isebenze ngakumbi kwimeko yokusebenza, kwaye inokukhusela intambo yocingo ekunxibeni okugqithisileyo, ukwandisa ubomi benkonzo, ukunciphisa ukungqubana phakathi kwentambo yocingo kunye iinxalenye zentsimbi. Phantse iipesenti ezingama-90 zomthi waseYurophu ngoku zilungelelanisa isikhokelo seNylon ngezibonelelo zayo ezingenakubuyiselwa.
Oku kulandelayo luhlobo oluqhelekileyo lwesikhokelo se-nylon.
Isikhokelo seMylon Nylon
Umgangatho wokusebenza kwe-crane factory guider performance standard
(1) Ukubanakho ukungena nokuphuma kwintambo ngaphandle kwesehlo.
(2) Ukubanakho ukucofa intambo ngokuthembekileyo ukuze intambo yocingo ingakwazi ukutsiba emseleni.
(3) Ukubanakho ukuhamba ngokufanelekileyo kunye nokudibanisa iintambo ngaphandle kokuzihlula.
(4) Ukufakwa ngokulula, ukuhlahlelwa kunye nokugcinwa kwezikhokelo zeentambo.
(5) Isikhokelo sentambo siya kuhlala sinqabile.
(6) Qinisekisa ukuba intambo yocingo lwentsimbi ine-engile ethile yokuphambuka kwicala le-reel axis ngaphandle kongenelelo phakathi kweentambo kunye nesilinda.
(7) Xa isetyenziswa ngokudibeneyo nemida yokuphakamisa, kufanelekile ukuba ibenako ukuqinisekisa ukuthintelwa okuthembekileyo.
Izinto eziluncedo zesikhokelo sentambo yenayiloni:
(1) Kulumkele ukubhijela intambo yocingo ukuqinisekisa ukusebenza kwesiqhelo sokuphakamisa umbane.
(2) Ukwandisa ubomi benkonzo ngeentambo zocingo kunye neereels.
(3) Ukutshintshiselana okuhle kunye nomgangatho ozinzileyo.
Izikhokelo zentambo ezintsha zinezibonelelo ezicacileyo ngaphezulu kwezo zisetyenzisiweyo ngokwendlela yokusebenza, ngakumbi ngokwe.
Iimpawu zokukhokelwa kwenayiloni xa kuthelekiswa nesikhokelo sentsimbi.
(1) Isikhokelo sentambo sikhokela intambo nut, ngaphandle kwebhloko yentambo sisebenzisa ubunzima, ukuxhathisa kwe-abrasion, ukumelana nokubola, ukuxinana, iiplastikhi zobunjineli zamandla amancinci - ukulahla (MC) uxinzelelo lwenayiloni, inkqubo yokuvelisa ilula. Iiparamitha zobuchwephesha bokusebenza kwenayiloni ye-MC zibonisiwe kule theyibhile iqhotyoshelweyo.
(2) Umphambili wentambo kunye nentsimbi yangasemva yesikhokelo sentambo inxibelelene nesikhonkwane sepini, esilungele ukufakelwa kunye nokudilizwa. Ngaphandle kwebhloko yentambo kwicala lentambo une-10° I-engile ye-oblique, xa intambo yocingo ijijekile, ngenxa yenyusi (MC) yenayiloni enobulukhuni, isikhokelo sentambo sinokumelana ≤ 3 ° ukutsala kwe-oblique.
(3) Uhlobo lwe-cast (MC) ye-nylon yexinene incinci, ine-self-lubricating elungileyo kunye ne-elasticity, ke ubunzima besikhokelo sentambo silula, akukho monakalo nakukrazuka kwintambo yocingo, kunokubandisa ubomi bentambo yocingo.
(4) H-uhlobo lokuphakamisa umbane uhlobo lwesiseko se-H1, ngokuhambelana ne-ZBJ80013.4-89 + ngentambo yocingo yombane yokuvavanya indlela yovavanyo “yovavanyo olwahlukeneyo. Xa kungekho nto yokutsala ubunzima bokuzimela, intambo yocingo yentsimbi inokukhutshwa ngokukhululekileyo kwisikhokelo sentambo kwintengiso yentambo, kwaye ifikelele kwi-JB / ZQ8004-89 kumgangatho wesalathiso semveliso ephezulu; Kumthwalo olinganisiweyo we-M4 womsebenzi oqokelelweyo phantsi kweeyure ezili-120 zovavanyo lobomi, vavanya isikhokelo sentambo, ukongeza kwintambo ngaphandle kwebhloko, cinezela ivili lentambo ukunxiba kwendawo, akukho enye impembelelo ekusetyenzisweni umonakalo.
(5) Ingasetyenziswa ngokuthe ngqo njengesikhokelo sentambo yokuqhushumba-ubungqina bokuphakamisa umbane.
Egqithileyo I-nylon roller kwisitokhwe
Okulandelayo: ubukhulu ekhethekileyo wenayiloni Coupling
Isikhokelo sentambo yeNylon
Isikhokelo seNtambo yeNayiloni